Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh : Waa In la iska Kaashado La Dagaalanka Kooxda Al-Shabaab | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh : Waa In la iska Kaashado La Dagaalanka Kooxda Al-Shabaab
Madaxweynaha Dawladda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku baaqay in la iska kaashado la dagaalanka kooxda al-Shabaab oo muddooyinkii u danbeeyey weeraro ka geysatay Muqdisho.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horreyn tacsi u diray dhammaan qoysaskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen dadkii isugu jiray shacab iyo askar ee weerarka ku nafwaayey.
Sidoo kale Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dadka dhaawacan ilaahay uga baryey Caafimaad degdeg ah in uu siiyo.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa amaan geesinimo leh u diray Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee shacabka ka difaacay waxyeelada Ururka Al- Shabaab kana hor Istaagay hadafkooda iney ka mira-dhaliyaan.
Madaxweynuhu wuxuu ku tilmaamay in weerarka ay Shabaab ku qaadday Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo qaabbilsan waxbarashada iyo tarbiyada ubadka Soomaaliyeed uu astaan u yahay sida ay kooxdani u marin habowsantahay.